မြင့်မားသောစိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ဆင့် - ခေတ်သစ်ယောက်ျားသည်အရေးပါသောအရည်အသွေးကို။ ဒါကနေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အာရုံကြောစနစ်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များခြင်းမရှိဘဲ, ကဖိစီးမှုအမျိုးမျိုးသယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အသားအရေအဖု, ပူးတွဲနာကျင်မှုနဲ့ကြွက်သားနာကျင်မှု, ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်, gastritis, ရင်နှင့်ပင်အားပျော့ကိုယ်ခံစွမ်းအား - စိတ်ဖိစီးမှုတစ်တုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သင်မကြာခဏဤအသရုပ်မှာတွေ့မြင်လျှင်, သင်စိတ်ဖိစီးမှုတိုးမြှင့်ဖို့နီးစပ်အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
? ဥပမာ, ဒီမေးခွန်းနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ပြုမူဆက်ဆံနေတဲ့နံနက်ပြီးနောက်နှိုးထတန်ဖိုးရှိဖြစ်ပါသည်:? "ဘယ်လောက်ငါအာဏာရှိသည်ပါဘူး," "ငါသည်အဘယ်သို့ချင်ကြဘူး", "ငါရဲစွမ်းသတ္တိအဘို့အဘယ်အရာကိုမလိုအပ်ပါဘူး" ။ သင့်ရဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ကောင်းအဖြေရောက်လိမ့်မည်။ ဂရုတစိုက်သူတို့ကိုနားထောင်ရန်သူတို့ကိုအတိုင်းလိုက်နာဥပမာ, အစောပိုင်းအိပ်ရာဝင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပေါ့ပါးတဲ့အစားအစာအပေါ်သွားပါ။
ဒါဟာသက်ရှိများ၏ဖိစီးမှုကိုအဆင့်ဆင့်ကြောင့်မပါလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည် - မေးခွန်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါပေမယ့်လည်းဇီဝကမ္မသာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုယျခန်ဓာကိုယ်နှိုက်ဟာနေရောင်ခြည် synthesizes ထားတဲ့လျော့နည်းဗီတာမင် D ကိုခံရလျှင်, ကိုယ်ခန္ဓာကိုအဓိကဓါတ်တိုးဆုံးရှုံးနေသည်နှင့်ကျရှုံးလိမ့်မည်။ သငျသညျနေရောင်သို့မဟုတ် tanning ကနေမရနိုင်ပါက, ဖက်တီးငါးကိုစား (halibut ငါး, ဆော်လမွန်, ငါး, mackerel, mackerel, ဆော်လမွန်, ရောက်ရေချိုငါး, etc) သို့မဟုတ်ပဲငါးကိုဆီတောင့ယူပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုခုခံတိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လိုမေးခွန်းတွင်, အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်စွမ်းအားဖြင့်ကစားနေသည်။ , လူတို့တဘက်၌တစ်ဦးအာဃာတကိုင်ပဋိပက္ခများဖြေရှင်းရန်, ရန်သူများကိုအပြစ်လွှတ်ခြင်းမရှိကြနှင့်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုစိတ်ဖိစီးမှုပြောခြင်းငှါ, နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကနေခံစားနေသည်။ သငျသညျကိုဆင်းယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ပိုမိုအသေးစိတ်, ပိုငျကနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဖိအားများနှင့်ခက်ခဲသည်သင်၏စိတ်ကိုခံစားကြရသည်။
ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, စိတ်ဖိစီးမှုမှခုခံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစိတ်ဖိစီးမှုစုပြုံကြောင့်ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရဖို့မဟုတ်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအလေးပေးဖို့အဓိကလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်:
; လမ်းများလမ်းလျှောက်ဖို့, ကခုန်, ကြိုး, စသည်တို့ခုန် - ကတတ်နိုင်သမျှရွှေ့ဖို့စည်းကမ်းလုပ်ပါ။
တစ်ဝါသနာ Get ဥပမာ, ဒီလှုပ်ရှားမှုမှကြံ့ခိုင်ရေးသို့မဟုတ်ချယ်လှယ်၏လယ်ပြင်တွင်သင်သည်အပျော်အပါးဦးရေအများဆုံးပေးသည်;
အခြို့သောအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းသှနျသငျ; အများဆုံးရိုးရှင်းသော - 8 ရေတွက်ဖို့တဖြည်းဖြည်းနှင့်နက်ရှိုင်းစွာရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်လည်းတဖြည်းဖြည်း (အကောင့် 1 တစ်စက္ကန့်မှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ညီမျှသည်) တူညီသော 8 အကောင့်မှာ exhale လျက်ရှိ၏
စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အခွင့်အာဏာများကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ - အကောင်းအဆိုး cons
ဘယ်လိုငွေရှာဖို့ - အကြံပြုချက်များ
တစ်ဦး spa ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မဖြစ်စလောက်အမြတ် - အဘယ်အရာကြောင့်အဘို့ဖြစ်၏နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုသူတို့က၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်သနည်း
10 ရက်များအတွက် anti-cellulite အစားအသောက်များတွင်
Yucca - မျိုးပွား
ဥပုသ်အတွက် Lenten အစားအစာ
ဆီးချိုခြေသည် - အိမ်မှာကုသမှု
အဆုံးမဲ့အပန်းဖြေ: Lohan နှင့် Tarabasov ပျော်စရာ Mykonos ၏ကျွန်းပေါ်တွင်
ဂျယ်လီကိတ်မုန့် "Broken ဖန်"
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းချက်ပြုတ်နှင့်ဆောင်းရာသီတွင်မူရင်းစိတ်ကူးများ - မှိုထီးချက်ပြုတ်ဖို့ကိုဘယ်လို